IsiPolish Masha • Ukuhlikihlizwa komzimba ne-NuRu Massage
Uphinde wenza i-aphoyintimenti futhi intombazane evela ezithombeni ihluke ngokuphelele… ..
Ushayela yonke indawo bese uthola UKUDUMEKA KAKHULU….
Usuku lwakho lokugcina LUMISELE ISIKHATHI futhi unakekele IMALI nje kuphela…
Ngaso sonke isikhathi lapho uzama ukwenza ISENSI (i-selfie ejwayelekile, isithombe ozishuthe sona, isithombe sangempela, isithombe esinenothi) ngoba awufuni ukungena ezimeni ezi-3 ezedlule?
Ake ngingene lapha. Ngimusha kulo mkhakha, kodwa ngiyazi ukuthi usuku kufanele lube lwangempela kangakanani…
NginguMasha, umfundi wasekolishi laseSanta Monica. Ngimncane futhi muhle, manje ngenza engikuthandayo ukukwenza, ngasikhathi sinye ngitshala imali ekusaseni lami ngemfundo. Angisoze ngakwenza ulinde unomphela futhi ubhukhe phezulu phezulu kungani? Ngoba ngiyasihlonipha isikhathi sakho nekhwalithi yesikhathi sethu sindawonye.
Izithombe zami zisanda kwedlula futhi nginamathisele lapha i-Instagram yami ukuze ukwazi ukufanisa isithombe sami sesikhangiso ne-akhawunti yezenhlalo. Ngizothanda ukukuthumelela i-selfie eyodwa ngemuva kweyakho.
Masibe nezikhathi zobumnandi nezingenakulibaleka ndawonye. Nginomqondo ovulekile ngifuna ukwethemba ukuthi uzonambitha ukunambitheka okusha kwenjabulo. Engikukhathalelayo ukuhamba kwamandla nothando lwethu…
Ngithumele umqhafazo ukuze ngenze i-aphoyintimenti YESIKHATHI ESIMANGA KAKHULU SEMPILO YAKHO NESAMI
Life short Izinyoni ziyandiza flying հ ߒ